ဆာ ... ကိုပြုလုပ်၏ကျန်မှသိသာရဲ့ ... ။ သူမသည်သငျသညျသို့မဖြောင့်ပဲ! (ထုတ်လုပ်) - Djs များအတွက် Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, Vjs, နိုက်ကလပ် 2019
SKU: #70 - DJ သမား 50 ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည် အမျိုးအစား: DJ သမား drop
ဆာ ... ကိုပြုလုပ်၏ကျန်မှသိသာရဲ့ ... ။ သူမသည်သငျသညျသို့မဖြောင့်ပဲ! (ထုတ်လုပ်)
တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့၏လက်ျာဘက်အစောင့်ယနေ့ညမေ့! ဝိုး! (ထုတ်လုပ်)
သငျသညျတခု All-ညဥ့် megamix အတွက်ပိတ်မိနေ! (ထုတ်လုပ်)
ယခုမှာ ... အမနာသီချင်းဆိုညဉ့်ရှည်သောအဘို့ကိုစတင်ခဲ့သည်။ (ထုတ်လုပ်)
စိတ်တိုင်းကျ DJ သမားအသံစစ်သွေးကြွ
အသံနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူတစ်စိတ်ကြိုက် script ၏ 30 စက္ကန့်အထိ! အားလုံးအသံသင်အမည်, ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကလပ်ပေါက်အတွင်းပိုင်း DJ တွေနဲ့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အမျိုးသားအသံသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုရှိသည်။ ဗြိတိန်ကအမေရိကန်, သို့မဟုတ်စပိနျ။ သင့်ရဲ့ရောသမမွှေများနှင့်ကလပ်အစုံတံဆိပ်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော! မင်္ဂလာဆောင်မိုဘိုင်း djs အသံအတွင်းမှသတို့သမီးနှင့်သတို့သားအမည်များကိုမီးမောင်းထိုးပြနေဖြင့်၎င်းတို့၏အရင်ဖျော်ဖြေဖို့ပိုကြော့ရှင်း add ဤသုံးပါ။ ကြီးမားတဲ့စှဲစေသည်!
ဂီတကိုကြိုက်မထားပါနဲ့။ သင်တို့ဆီသို့လာမယ့်လူတစ်ဦးအပြစ်တင်! (ထုတ်လုပ်)
အားလပ်ရက် Vol 1 ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။
20 အပြည့်အဝ DJ Drop သင့်ရဲ့အရင်ဖျော်ဖြေသည်အားလပ်ရက်ရာသီသုံးစွဲဖို့ခြေရာခံထုတ်လုပ်! ပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်များ!
သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်ရောင်းအားအပေါ် (ဒီဇင်ဘာလ 11, 2017)
အားလပ်ရက် DJ စစ်သွေးကြွ - track အိမ်ခန်းနှင့် (အောက်တွင်နားထောငျကွ)
ဒီ timeless ဂန္နှင့်အတူပြန် 80 ရဲ့ Going! (ထုတ်လုပ်)